Star–Konsilin’i Monaco : mitohy ny fiaraha-miasa | NewsMada
Star–Konsilin’i Monaco : mitohy ny fiaraha-miasa
Par Taratra sur 04/06/2018
Tetikasa roa avy hatrany. Mitohy ny fiaraha-miasa efa nisy an-taona maro, eo amin’ny vondron’orinasa Star sy ny konsilin’i Monaco. Mahakasika ireo asa fanasoavana ny fiarahamonina izy ireo, natao hanampiana ireo fianakaviana sy ankizy sahirana.
Araka izany, nisy ny fizarana lamba firakotra miisa 1 000, ho an’ireo ankizy latsaky ny 10 taona, teny amin’ny fokontany Anosisoa Ambohimanarina, Imaibahoaka, Amborompotsy, Androndrakely Saropody, Faliarivo Ambanidia, Andohatapenaka II, Antetezana Afovoany II, Ambohimirary, Andraisoro ary Ambohidroa.
Mbola hitohy hatramin’ny 8 jona ho avy izao ny fizarana ireo bodofotsy ireo. Efa hatramin’ny taona 2015 no mifampitantana tamin’ity tetikasa iray ity ny Star sy ny konsilin’i Monaco, hitondra ny anjara birikin’izy ireo amin’ny hafanana ao an-tokantranon’ireo sahirana.
Mahakasika ny lafiny fanabeazana kosa ny tetikasa faharoa. Misy ireo mpianatra mamiratra any an-dakilasy kanefa avy amina fianakaviana sahirana. Mba ho azo antoka fa tsy ho maty momoka noho ny tsy fahafahan’ny ray aman-dreny ny ezaka ataon’ireo mpianatra, horaisina an-tanana ny fampianarana azy ireo. Hisitraka izany ny mpianatra 17, efa eny amin’ny lycée, ka mitentina 20 tapitrisa Ar ny saram-pampianarana azy ireo mandritra ny taom-pianarana roa misesy. Afaka manohy ny fianarany any amin’ireo sekoly malaza toy ny St Michel sy St Antoine izy ireo.